Izixazululo Zezinyo Ezihamba Phambili | I-OptiSmile ™ Advanced Dentistry
ICEREC CAD / CAM
Izixazululo zamazinyo ezivela ngokuzayo.
ikusasa lokwelashwa kwamazinyo.
Noma ngabe udinga i-orthodontist ukusiza ukuqondisa amazinyo akho emuva endaweni yawo, udokotela wezifo zokufakelwa ukuze akwenzele izinyo elisha, isiguli, udokotela wamazinyo ophelele wokuthola izinkinga zakho noma owokuhlanzeka ngomlomo onobungane, u-OptiSmile unikeza uhla oluphelele lwezinsizakalo zamazinyo eKapa .
Izixazululo zamazinyo ezivela ngokuzayo. ikusasa lokwelashwa kwamazinyo.
Amakhompyutha asize ukwakhiwa kokufakwa kwe-ceramic, ama-veneer, amabhuloho nokufakelwa, konke ukuvakashelwa okukodwa. Thola ukuthi ubuchwepheshe bethu be-CAD / CAM busebenza kanjani ekwakheni kabusha amazinyo akho.
Ukwesaba imijovo nobuhlungu kuyinombolo yokuqala yokwesaba abantu abavakashela udokotela wamazinyo. Induku ebandayo iyahlasela kancane.
Ungashiyi i-molar ingavuliwe. I-Orthophos 3D X-ray ikhiqiza izithombe ezinembe ngokweqile ze-3D zomlomo wakho ukusisiza sithole noma yiziphi izinkinga zamazinyo.
I-rolls royce yama-microscopes. Kwa-OptiSmile, senza ngisho nokuhlanzwa kwamazinyo ekukhuliseni ama-6x ukuze singalahlekelwa lutho. Thola okuningi ngemikroskopu yethu.
Thola ngqo okufunayo ngaphambi kokuba kuqale noma yimuphi umsebenzi wamazinyo. Ngenxa yobuchwepheshe obuphambili be-CAD CAM, iDigital Smile Design ikuvumela ukuthi ube ngumdidiyeli wokubambisana kokumamatheka kwakho okusha, kuze kube semininingwane yokugcina.
I-laser yethu ekhethekile ikhanyisa noma yiziphi izimbotshana ezifihliwe ngaphansi koqweqwe lwawo, noma kulukhuni ukubona ama-nooks nama-crannies omlomo wakho. Thola ukuthi isebenza kanjani.
Smile nge Invisalign ™
Ngabe uhlale ufuna amazinyo aqondile ngaphandle kwezinsimbi zensimbi? Iqiniso, i-Invisalign yangempela eneziguli ezingaphezulu kwezigidi eziyi-9 emhlabeni wonke. I-3D ephrinta ukuqondanisa okucacile okuvela e-USA kungaqondisa amazinyo akho ezinyangeni eziyisithupha.
Qhakaza Ukumamatheka kwakho
Okuyiqiniso, okwangempela kwePhilips ZOOM Teeth Whitening kususa amabala nokushintsha kombala, kukhanyise amazinyo futhi kuthuthukise kakhulu indlela abukeka ngayo. Isazi sezokuhlanzeka kwethu u-Emma King ungungoti ophambili waseNingizimu Afrika ku-ZOOM.
Ukopha Izinsini Isazi sesikhathi
Ngabe unezinsini ezophayo, umoya onukayo noma amazinyo axegayo… udinga uchwepheshe wesikhathi. Ama-Periodontists abeka nokufakelwa futhi abuyisele izinsini ezihlelayo. I-OptiSmile ingasiza.
Ukuhlolwa okuphelele nodokotela wamazinyo, i-panoramic x-ray, izithombe zangaphakathi nezomlomo nokuhlanzwa nge-OptiSmile yethu yokuhlanzeka ngomlomo. Sicela ushayele imininingwane.
Ukhathazekile ngezimali? Okwezinqubo ezingamboziwe ngokuphelele yi-medical aid, kunezinhlobo ezahlukahlukene ze- izinketho zezimali zamazinyo ukusiza ukwenza utshalomali lwakho emazinyweni akho luphathwe kakhudlwana.
Noma ngabe udinga i-orthodontist ukusiza ukuqondisa amazinyo akho abuyele endaweni yawo, udokotela wezifo zokufakelwa ukuze akwenzele izinyo elisha, isiguli, udokotela wamazinyo ophelele wokuthola izinkinga zakho noma owokuhlanzeka ngomlomo onobungane, i-Optismile inikeza uhla oluphelele lwezinsizakalo zamazinyo eKapa .
Izixazululo Jikelele Zamazinyo
Inikela ngezinsizakalo zamazinyo zawo wonke umndeni. Umgomo wethu ukuhlinzeka ngezinga eliphakeme lokunakekelwa kweziguli nokwelashwa kwamazinyo endaweni ephumuzayo nekhaya.
Izixazululo Zamazinyo Ezimonyo
Unamazinyo anamabala noma aphuzi? Ngabe amazinyo akho asontekile futhi alwela isikhala? Masilungiselele ukumamatheka kwakho ngama-orthodontics kanye namazinyo wezimonyo.
Invisalign ™ Sula ama-Braces
Ngifuna Ukumamatheka Okukhulu
Izixazululo Zokwenziwa Kwamazinyo
Lelo zinyo elilahlekile alizibuyi lodwa. Singakukhulula ebuhlungwini bese sigcwalisa izikhala ku-grin yakho.
Izixazululo Zamazinyo Ezingane
ukwethula izingane emhlabeni wokwelashwa kwamazinyo ngendlela enhle nokwenza ukuvakashelwa kwamazinyo kube yinto ejwayelekile, enempilo esikhundleni salokho okwenzeka kuphela lapho besezinhlungwini, yingakho kuhlotshaniswa nokunganaki.
Udokotela Wamazinyo Wezingane